GTT International 2013-04-15 00:00:00 – MyDago.com aime Madagascar
GTT International 2013-04-15 00:00:00
Fanambarana ho an’ny vahoaka Malagasy
“Afaka milatsaka ho Filoham-pirenena i Ramatoa Lalao Ravalomanana”
Taorian’ny fanendren’ny mouvance Ravalomanana an-dramatoa Lalao Ravalomanana dia manome fanazavana izahay momba ny lalàna izay tokony ho toavina mikasika ny filatsahany ho filoham-pirenena Malagasy.
Ramatoa Lalao Ravalomanana dia manana ny toeram-ponenany raikitra ao Faravohitra 101 Antananarivo Madagasikara efa an-taonany maro.
Tsy mbola nisy taratasy fifindra-monina nataony hiala tao amin’io fokontany io hatramin’izao.
Ny fotoana nijanonany tany Afrika atsimo dia vonjy maika noho ny toe-draharaha ara-politika tamin’ny 2009 fa tsy azo adika ho fifindram-ponenana.
Noho izany dia mampahafantatra ny vahoaka Malagasy izahay mba tsy ho voarebirebin’ny mpanao politika fa manana ny toeram-ponenany ara-dalana ao amin’ny fokontany Faravohitra 101 Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana, ary afaka mandray anjara amin’ny fifidianana rehetra eto amin’ny firenena Malagasy, na ho anisan’ny mpifidy na ho anisan’ny hofidiana.
Genève, faha 15 avril 2013
CIRGN : MANAIKY NY ARTIKLA 20, TSY MIRAHARAHA NY ANDININY 45
International women’s day address from Mrs. Lalao Ravalomanana
Auteur GTT International GEPublié le 15 avril 2013 15 avril 2013 Catégories Politique
1 pensée sur “GTT International 2013-04-15 00:00:00”
Nmareg dit :
28 mai 2014 à 7 h 46 min
Buongiorno , scrivo perche8 con un cuilcoco ( 6 mesi) di pastore tedesco.E’ un cuilcoco molto socievole in famiglia ma quando lo porto fuori appena vede un altro cane diventa matto e ho notato che questo atteggiamento ce l’ha solo se leagato al guinzaglio.come posso fare?Grazie 1000 saluti Chiara
Précédent Article précédent : Hiroso amin’ny fifidianana ny Ankolafy Ravalomanana : Ramatoa Lalao RAVALOMANANA no kandidà
Suivant Article suivant : TONGASOA NY MAHERIFO AVY ANY AFRIKA ATSIMO !